SAB-QUNNAMTII FI TAMSAASA WANGEELAA
Jarraa 21ffaan jaarraa qaroomni odeefannoo (information technology) sadarkaa olaanaatti olba’ee guddatedha. Guddinni kuni immoo haala sabqunnamtii addunyaa qofa utuu hinta’iin haala guutummaa jireenya hawaasa addunyaa geeddareera.
Waggaa dhibba fuundura qaroomni sabqunnamtii addunyaa akka isa ammaa kana hin guddanne; baayyee yaraa ture. Wantootni haaraan amma mula’atan baayyeen dur hinture. Jaarraa tokko fuundura haalli isaa akka hara’aa hinturre. Tvn hindhalatne, radiyoon hinturre, wanta akkaa interneetii fi mobaailii immoo uumamuu iyyuu indanda’a jedhamee tasa hinyaadamne. Meshaan sabqunnamtii tokkichi bar asana ture meeshaa maxxansaa (printed media) qofa ture. Odeeffannoon waraqata irratti maxanfameetu sabni ittin wolqunnama ture. Kunu hinjirtu, kunu mana hinjirtu akkuma jedhamu innumti iyyuu saba keenya irraa baayyee,baayyee fagoo ture.
Haata’u iyyuu malee qawwa xinnoo bar asana ture, carraa xinnoo bar asana argameetti gargaaramuudhaan Onismus Nasib namni biyya Oromoo, hojii Waaqayyo itti ulfina argatu, waan dhalootni gatii guddaa itti keennu, waan seenaan immoo hinirraanfatne hojjete. Macaafa qulqulluu Afaan Oromootti hiikudhaan maxxansiisee akka inni saba oromoo bira ga’u godhe. Kana malees macaafota biraa miltoowwan isaa woliin ta’uudhaan qopheessee maxansiisuudhaan afaanicha badiisa olche, sabicha immoo sagalee Waaqayyoon intajaajile.
Barri inni isa booda ture addunyaatiif bara milka’inaa, bara itti qaroomni sabqunnamtii itti foyya’aa dhufe yoo ta’e iyyuu sab Oromoofis ta’e Afaan Oromoof garuu yeroo hammaataa ture. Afaanichi owwaalamee waan tureef carraan guddinaa baayyeen akka isa darbu taasifameera. Saba Oromoo fi afaan isaa irra maaltu ga’e isa jedhu yeroo biraaf kaawwannee har’a haala maalii keessa jirra, carraa attamiitu jira, maal irratti hojjechuu qabna isa jedhu irratti maria’nna.
Ha’ra sab-qunnamtiin (mass media ) guddina hawaasa tokko keessatti ga’ee inni qabu ol aanaa ta’uun isaa kan wol nama gaafachiisu miti. Hawaasni keenyas isa kana keessaa ala miti. Karaa siyaasaa, gamaa dinagdeetiin akkasumas gama hawaasummaatiin mediyaan ga’ee olaanaa qaba. Kallattii tamsaasa wongeelaantiin ammoo mediyaan human gargaarsa guddaa kennuu danda’udha.
“Digital media” jenne kanneen nuti waamnu worri akka Interneetii, mobaayilii, facebook, tweeter, email, youtube… aadaa wolqunnamtii addunyaa keenyaa bifa kanaa dura mul’atee hinbekneen geeddareera. Kun immoo hojii isa itti waamamne hojii tamsaasa wongeelaaf carraa haaraa uumee, balabala haaraa bane. Carraa haaraa argamutti fayyadamanii hojii ittiwaamaman hojechuu immo sagaleen Waaqayyoo nuabbooma. Efeson 5:16.
Onismus Nasib faa waggaa dhibba fuundura carraa dhiphoo fi xinnoo argametti fayyadamanii hojii guddaa fi bal’aa hojjetan. Isa boodas haalli rakkisaan, haalli ari’atamaa utuu isaan hindaangessiin ayyaana Waaqayyo isaanii baayyiseen Oromootni hojii ulfina qabeessa hojjetan jiru.
Gartuun midiyaa TWOWA namoota Waaqayyoo gama kanaan hojii bu’a-qabeessa hojjetan duukaa bu’ee sabatti mul’isuudhaan dhalootni dhuftu akka yaadatuu gochuuf fuula kana irratti maxxansuun xiyyeeffannaa isaa keessaa isa tokko si’a ta’u gara fuunduraatti bifa gaaffii fi deebiitiin, bareeffamaan, barsiisa audio fi video tiin qophaa’an garagaraa qabatee fuula kana irratti dhihaata.
Ammaaf Luba Doktor Tasgaraa Hirphoo woliin gaaffii fi deebii goone qabannee dhihaanneerra. L. Dr. Tasgaraa Hirphoo dagaagina afaan Oromoo fi babaal’ina wongeelaa keessatti ga’ee olaanaa kan qaban kitaabota baayyee baressuudhaan maxansiisanii saba keenyaan ga’aniiru. Kan keessaa immo inni guddaan Macaafa qulqulluu afaan oromoo qubee laatiiniitti galagalchuudhaan maxansiisuu isaaniiti. Umriin isaanii yoo torbaatama irra darbe iyyu L. Dr Tasgaraan amma iyyuu mul’ata guddaa qabu. Aadaan sab-qunnamtii haaraan kunis hojii wongeelaaf balbala haaraa baneeraa jedhu. Kallattii kanaan hojiin hojetamuu malu baayyee akka ta’e dubbatu. Egaa guutummaa gaaffii fi deebii kanaa dhaggeeffachuudhaan akka eebbifamtan abdii guddaa qabnna.GAAFFII FI DEEBII KANA DHAGEEFFACHUUF AS XUQAA